Gịnị bụ Mmemme Mgbasa Ozi & Ahịa? | Martech Zone
Teknụzụ ahịa na-aga n'ihu ugbu a ma ọtụtụ mmadụ nwere ike ha amataghị ya. Mgbasa ozi dijitalụ malitere site na nkwukọrịta na mgbasa ozi mgbasa ozi. Otu ihe atụ nwere ike ịbụ na ụlọ ọrụ ga-emepụta oge ya nke ọdịnaya, ahịa, mgbasa ozi na akwụkwọ ozi. Ha nwere ike tweak ma bulie ha maka nnyefe na ọnụego pịa-nke kachasị mma, mana karịa ma ọ bụ obere ọdịnaya nyefere na usoro iheomume - ọbụghị ndị ndu ma ọ bụ ndị ahịa.
Automzụ ahịa akpaaka wetara ohere iji kewaa ndị ahịa gị na mmadụ pụrụ iche, mepụta ọdịnaya maka ha - ọbụlagodi nkeonwe, ma nyefee ha ha na usoro a haziri ahazi ebe ndị na-akpata omume ha ga-ekpebi usoro ọzọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, profaịlụ na ndụ ndụ ka na-adaberekarị na marketer. Chọpụta, ọ dabeere a otutu nnyocha na analysis… ma ndị ahịa ka bụ bụghị na-elekọta nke ha onwe ha akakabarede ụzọ.
Tinye nnukwu data. Ikike itinye igwe mmụta na nyocha data na oge na-enye ohere ka teknụzụ azụmaahịa zụlite usoro amụma na oke ziri ezi. Ugbu a onye na - azụ ahịa nwere ike ịkọwapụta usoro ndụ ha nke onwe ha ebe mgbanwe aghụghọ na agwa gafere njikọ na-anọghị n'ịntanetị, itinye aka n'ịntanetị, mkpanaka na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ịme ka ha gbadaa ụzọ ntụgharị. Ọganihu ndị mara mma na-akpali akpali nke na-enweghị mgbagha ịgbagha ahịa, bulie nloghachi na ntinye ego, ma belata nrụgide na ịdọ aka na ntị anyị na-etinye n'ọrụ na atụmanya anyị na ndị ahịa anyị.
Gịnị bụ Mmemme Mmemme
Usoro ahụ Mmemme mmemme (A makwaara dị ka mmemme mmemme or mgbasa ozi mmemme) gụnyere ọtụtụ teknụzụ nke na-achịkwa ịzụta, ntinye, na njikarịcha nke ngwa ahịa mgbasa ozi, na-edochi usoro ndị mmadụ. N'ime usoro a, ndị mmekọ na ndị na-achọ ahịa na-eji usoro akpaaka na iwu azụmaahịa iji tinye mgbasa ozi na ngwa ahịa mgbasa ozi elektrọnik. A na-ekwu na usoro mmemme bụ ihe na-eto ngwa ngwa na mgbasa ozi ụwa na ụlọ ọrụ mgbasa ozi. Wikipedia.
Mgbasa ozi dị ugbu a n'ofe usoro mgbasa ozi ọhaneze ọ bụla. Ihe ngwọta ọ bụla nwere nhọrọ ezubere iche nke nwere ike ịdabere na profaịlụ, omume, ọnọdụ obodo, ma ọ bụ ngwaọrụ. Nke a na-enye ndị ahịa ohere ohere ịzụlite mgbasa ozi nke na-agagharị na atụmanya site na ntụgharị. Nke a bụ ohere dị egwu karịa na oge iji nweta oge karịa dị mfe na-emegharị ahụ atụmatụ.
Mmemme mmemme na-enye ohere ka onye na-ere ihe iji setịpụ ikpo okwu iji bulie ma ebumnuche, ịrịọ na ogbugbu iji bulie nloghachi na itinye ego. Enwere ike ịbawanye ọnụ ọgụgụ ndị na-eduga ebe ọnụọgụ ọ bụla na-eduga nwere ike ịga n'ihu na-kachasị mma maka mmefu kacha nta. Ekwe bụ otu ikpo okwu dị otú ahụ.
Usoro ịgbazinye ego ejirila dịrị oge ụfọdụ, mana ha na-adịkarị mgborogwu ma ghara ịdabere na ya. Ka ọ na-erule mgbe ị chọpụtara ihe na-ezighị ezi na ntọala gị, ị nwere ike ịfụfu mmefu ego gị. Ọganihu na teknụzụ data yana plethor nke data data na-enyere ọgbọ ọhụrụ nke usoro ntanetị mmemme na-ebelata ihe ize ndụ nke mgbasa ozi mmemme jikọtara ya na usoro ụnyaahụ. Mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi na-enye aka na ahịa mmemme n'ihi na ha na-agbanwe agbanwe na olu ha na ọtụtụ data dị.
Nke mepụtara ọhụrụ infographic egosiputara ise nke netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta na uru nke ijikọta ha na nyiwe mmemme.
Tags: akpaka biddingnnukwu datadatamgbasa ozi mmemmemmemme mmemmemmemme mmemmeonye mgbasa ozi mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozi na-azụmgbasa ozi mgbasa ozimgbasa mgbasa ozi mgbasa ozidata mgbasa ozi mmekọrịtana-amị mkpụrụ
Feb 1, 2016 na 5:04 PM
Ebee ka Nnukwu data na-abịa site na nke ga-ebugharị mgbasa ozi mmemme?
Feb 1, 2016 na 8:01 PM
Peter, ọ bụ ngwakọta nke omume omume peeji nke jikọtara site na nyiwe ndị ọzọ, data igwe mmadụ na data firmraraphic, saịtị mmadụ, akụkọ ọchụchọ, akụkọ ihe mere eme na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla. Ngwongwo mmemme kachasị ukwuu na-ejikọta ugbu a ma nwee ike ịchọpụta ndị ọrụ na-agafe na saịtị yana ọbụlagodi ngwaọrụ!